Ultraviolet sterilizer Manufacturers uye Suppliers - China Factory - Quanzhou waimaoniu Import uye Export Trade Co., Ltd.
Musha > Zvigadzirwa > Denda rekudzivirira kwezvirwere > Ultraviolet sterilizer
Ultraviolet sterilizer ndeye UV sterilizer inoshandisa yakakosha yakarongedzwa kukwirira-kwakanyanya, kukwirira uye hurefu hwehupenyu hupenyu hwechiedza UV-C inogadzira chishandiso chekuwirisa mvura inoyerera kuti iwane disinfection. UV sterilizer ine sterilization, nezvimwe.
Ultraviolet sterilizer Nhamba:
Item Type Inotakurika Ultraviolet Mwenje
Chiedza Chiedza LED
Kuvhenekera Angle 120 Degree
ISimba Simba 6mW
Simba Remagetsi 10mW
Nhare dzeBvuu 2
Nhamba ye LED 24
Kushanda Voltage DC2.7-4.2V
Rated Simba 10W
Bhatiri Yakavakwa-mu 200mA Anobvisazve Bhatiri
Kuchaja Nguva About 30min
Kushanda Nguva About 100min
Chinja Press Button
Shell Material Plastiki
Ukuru hwechigadzirwa About 120x30x21.5mm (L x W x H)
Package inosanganisirwa 1pc x Inotakurika Ultraviolet Mwenje
1pc x Mushandisi Manual
KUSVIRA PAKAIPA URTRAVIOLET STERILIZER
KUSVIRA 300 * 250 * 150 MM
Kurema kwe Net pasina kuiswa 43g
1. Nekuda kwechiedza uye chekusiyanisa musiyano, ruvara rwechinhu chacho runogona kunge rwakasiyana zvishoma kubva pamufananidzo
2. Ndokumbirawo ubvumidze 1-3cm mutsauko nekuda kwekuyerwa kwechinyorwa.
3. Chigadzirwa chigadzirwa chemagetsi, ndapota pukuta zvakasviba pamusoro netauro nyoro, ASI ashambidze nemvura.
4. Mashandisiro Ekushandisa:
(1) Dhinda uye ubate kwemasekondi matatu kuti utange, uye wobva wadzvanya switch?
zvishoma, mwenje unobatidza mwenje weru Ultraviolet wadzimwa.
(2) Iyo iripedyo nechinangwa, zvirinani kuita saridhi
Kugadziriswa kweUV Sterilizer: Zvokugara Zvishandiso / Zvokushandisa Zvishandiso
UV sterilizer Chirungu zita: Ultraviolet sterilizer
Ultraviolet sterilizer basa: sterilization
Ultraviolet sterilizer disinfection nheyo:
Kana mabhakitiriya, mavairasi, nezvimwewo mumvura zvayeredzwa neimwe piritsi yeiyo Ultraviolet UV-C yechiedza (wavelength 253.7nm). Yayo masero DNA uye chimiro chakaparadzwa, uye kugadzirwa kwemasero hakugone kuitwa, nokudaro kuchizadzisa mvura disinitness uye kucheneswa. Mutsetse wekutarisa une wavefu ye190nm unogona zvakare kuora mamorekuru emvura mumvura, kugadzira hydrogen radicals uye oxidize organic mamorekuru mumvura kusvika kabhoni dioksijeni, kuitira kuti ibudirire chinangwa chekubvisa TOC.
The disinfection nhungamiro UV chikwesheso sterilizers vachishandisa UV hwemvura zvemichina vaudzewo kuva inonyatsobudirira kuuraya utachiona nzira. Steam mbereko haazoomerwi chaizvo uye vakachengeteka, pasina anokuvadza makemikari. Kuenzaniswa neiyo ultraviolet rays, inoshanda kubvisa bhakitiriya. Kunyange vanachiremba uye vanachiremba vemazino kuvimba chiutsi kuti chenesa zvikuru!
Ultraviolet radiation inogona kuuraya hutachiona maseru. Inowanzoshandiswa kuuraya mabhakitiriya mudenga nepamhepo dzakatwasuka (senge matemba), asi pane makona mazhinji, magaka, uye nzvimbo iri pakati perima uye mazino mabhuruki haigoni kusvika UV. Kunyangwe mushure mekubvisa hutachiona hweUV, pachine mabhakitiriya anogona kuita mubrashi rako remazino.
Rimwe dambudziko rekuuraya mishonga yekubvisa mazino ane UV nderekuti ivo havapi nzvimbo isina hutachiona yekuchengetedza bhurasho rako rezino. Pakati pezviviri izvi, bhurosi rezino rinosara rakanyorova, uye munzvimbo yakavharwa, inotarisirwa kuumbwa, uye mabhakitiriya ari mumba yekugezera achasvibisa mazino zvakare. Uyezve, vanhu vakawanda havashambi maoko avo vasati Kukwesha mazino avo, izvo zvinosvibisa mubato mashizha ari yakavanzwa youtano. Yakawanda yeUIV disinitness uye basa rekuchenesa rinongotungamirwa kumusoro weino mazino, kwete kurapwa kwese.
Ultraviolet sterilizer zvakanakira:
1. Yakakwirira-zvinobudirira sterilization: Kazhinji, sterilization chiyero chebhakitiriya nemavhairasi nema Ultraviolet rays inogona kusvika 99% -99.9% mune imwe kusvika kumasekondi maviri.
2. Yakakwirira-inoshanda sterilization yakajeka-isingaiti: Iyo yakasarudzika-yakasvibirira sterilization ye Ultraviolet ndiyo yepamusoro, inogona kuuraya anenge ese mabhakitiriya nemavhairasi nehupfumi hwakanyanya.
3. Hapana chekusvibisa kwechipiri: UV sterilization haina kuwedzera chero makemikari, saka haizo kukonzera chechipiri kusvibiswa kwemvura muviri uye nharaunda yakatenderedza, uye haizoshanduri chero zvikamu mumvura.
4. Kuchengetedza uye kuvimbika kushanda: Tsika disinawoniti matekinoroji akadai chloride kana ozone, ma disinfectants iwo ega ane huturu uye anopisa zvinhu, uye UV disinitness system haina ngozi dzakavanzika idzi.
5.Mutengo wakaderera wekushandira uye kugadzirisa: UV michina yekushomeka ine tsoka shoma uye zvinodiwa zvivakwa, saka dura rekudyara rakaderera, uye mutengo wekushandawo wakaderera. Pane chiyero chematani chiuru chemarangi emvura, mutengo wayo unongopayirirwa / 2.
Yetatu, hunhu hweUni disinfection michina
1.Ultraviolet sterilizer inoshandisa yakakwirira-kushanda UV-C (LL kana LH) UV mwenje
Iyo yepasi rose inotungamira yakaderera-kudzvanywa yakakwirira-yakawanda simba ultraviolet inosarudzwa, uye hupenyu hwebasa remwenje hwakavimbiswa kuve anopfuura ma8000-10000 maawa.
2. Ultraviolet sterilizer inogamuchira quartz chubhu ine yakakwirira mwenje transmittance uye yakachena kuchena, iyo inogona kuve nechokwadi kuti ma Ultraviolet rays inopararira kuburikidza kupfuura 90%.
3. ultraviolet sterilizer anoshandisa zvemberi rusingaperi uye mukuru-kuchinyanya ultraviolet chinokosha kutsigisa igwa munyika, izvo zvinogona nechokwadi kunowanzoitika kushanda yose ezvinhu pasi zvakaomesa ezvinhu.
4. Iyo Ultraviolet sterilizer inoshandisa yakakwirira-mhando simbi isina chigadziriso (304 kana 316 zvinhu), uye yemukati madziro ereakisi yakanyatso kupendwa kuti uvandudze sterilization mhedzisiro.
Chechina, iyo inactivation mhedzisiro ye Ultraviolet disinawon pane microorganisms mumvura
Sterilization inoshanda yeiyo ultraviolet tekinoroji kune akajairwa mabhakitiriya mavhairasi (Ultraviolet radiation intensity 30mW / cm2)
mutsa zita 100% kuuraya nguva (masekondi) mutsa zita 100% kuuraya nguva (masekondi)
Hutachiona Bacillus anthracis 0.30 Hutachiona Mycobacterium tuberculosis 0.41
Hutachiona Diphtheria 0.25 Hutachiona Vibrio cholerae 0.64
Hutachiona tetenasi 0.33 Hutachiona Pseudomonas 0.37
Hutachiona Clostridium botulinum 0.80 Hutachiona Salmonella 0.51
Hutachiona Shigella 0.15 Hutachiona Intestinal fever 0.41
Hutachiona Ekcoli 0.36 Hutachiona fivha 0.53
Utachiona Adenovirus 0.10 Utachiona utachiona hwechidzihwa 0.23
Utachiona Phage utachiwana 0.20 Utachiona Poliovirus 0.80
Utachiona Hutachiona hweCoxsackie 0.08 Utachiona Rotavirus 0.52
Utachiona Hutachiona hweAike 0.73 Utachiona Fodya yemhando yehutachiona 16
Utachiona Acovirus mhando I 0.75 Utachiona Hepatitis B hutachiona 0.73
muforoma spores Aspergillus niger 6.67 muforoma spores Nyoro spores 0.33
muforoma spores Aspergillus 0.73-8.80 muforoma spores Penicillium 2.93-0.87
muforoma spores Macrofaeces 8.0 muforoma spores Penicillium toxin 2.0-3.33
muforoma spores Mucor 0.23-4.67 muforoma spores Penicillium imwe fungi 0.87
Fish chirwere Fung1 chirwere 1.60 Fish chirwere Utachiona hwepancreatic necrosis 4.0
Fish chirwere Iro chena nzvimbo 2.67 Fish chirwere Hutachiona hemorrhagic chirwere 1.6
Canada-2020040742C HTM-8S EN 55014
DL-2020040743C HTM-8S FCC Chikamu15
Hot Tags: Ultraviolet sterilizer, Vagadziri, Vagadziri, Wholesale, Fekitori, Tenga, China, Yakagadzirwa muChina, Mutengo, Mutengo weChidimbu, Quotation, CE, FDA
UV sterilizerInotakurika Ultraviolet MwenjeImba yeUV SterilizerMhuri Ultraviolet sterilizerOffice UV SterilizerOffice Ultraviolet sterilizerInotakurika UV SterilizerPortable sterilizerSterilizerVirus sterilizer